I-Triton 's Treasure -3 Bedroom Condo on the Beach - I-Airbnb
I-Triton 's Treasure -3 Bedroom Condo on the Beach
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Brian
I-Condo emangalisayo ebhishi. Ukubukwa kwe-Atlantic ne-Bay kusuka ebhalikhoni futhi ungezwa amagagasi ehla esuka ebhalikhoni evulekile.
Inefenisha ephelele, izinto zikagesi eziyinsimbi engagqwali, amatafula enziwe nge-granite, ene-bar evulekela ekamelweni elihle. Ikhabethe elengeziwe nendawo yokuzijabulisa. Ikamelo elivulekile elinekhabethe lezingubo zokugqoka.
Ifenisha yehlelo le-ramtan enemiqamelo ku-patio enkulu enokubukeka okuhle.
Amashidi namathawula kuzonikezwa kukho konke ukuhlala. Umshini wokuwasha nokomisa useyunithi. Indawo yokugcina isimo sezulu esilawulwa izihlalo zasolwandle, inqola yasebhishi, namabhodi e-boogie ozowasebenzisa.
Ama-TV ahlakaniphile ase-Roku afakwe odongeni ekamelweni ngalinye, kanye nendawo evamile ukuze ungene ngemvume kusevisi yakho yokustrima oyithandayo. I-K-Cup nomshini wekhofi we-drip nakho kutholakala ngaphakathi kweyunithi.
Kukhona futhi umbhede ogoqwayo, we-memory foam kanye ne-Pack n' Play etholakala ngaphakathi kweyunithi.
Izindawo zokubhukuda zivaliwe okwamanje futhi kulindeleke ukuthi zivuleke ngasekupheleni kuka-May 2022.